Ọbịbịa nke Typhoon Talim na-eme ka mwepụ nke ihe karịrị mmadụ 600 nọ na Japan | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị nọ ọnwa ole na ole ebe oke osimiri Atlantic na Pacific na-abụkarị oke ikuku mmiri siri ike na afọ a. Ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri ahụ na-enye ajọ ifufe, a na-akpọ ajọ ifufe na Eshia nnukwu ike, ọ gaghị eju anyị anya ma ọ bụrụ na, ka oge na-aga, ha na-akpụwanye.
Adịghị anya gara aga anyị na-ekwu maka ya Irma, Ajọ ifufe nke Atọ 5 nke kpatara nnukwu mbibi ka ọ na-agafe na Caribbean na Florida. Ọfọn, dịka a ga - asị na ọ bụ ihe nkiri egwu, ugbu a ọ bụ Japan ga - eme ihe ndị dị mkpa iji chebe ndị ya, ebe ọ bụ na Typhoon Talim na-aga ịbụ »Irma» Japanese.
Typhoon Talim, 3 nke oge ikuku Pacific, nke na-ewusi ike na Oké Osimiri China na ụbọchị 11 gara aga, mere ka Japan daba ụnyaahụ na 30: 2.30 oge mpaghara (XNUMX GMT) na obodo Minami-kyushu, na nsọtụ ndịda nke agwaetiti Kyushu nke dị na ndịda. Ebe ahụ, ahapụla oke mmiri ozuzo na ifufe karịrị 130km / h.
Maka nchekwa, nyere iwu ka ewepụ ndị mmadụ 448 na mpaghara dị iche iche nke obodo Kumamoto na Myzaki, yana ihe ruru mmadụ 640.000 bi na obodo ndị ọzọ nke agwaetiti ahụ.. Ha kwesiri ime ya: ajọ ifufe ahụ, nke na-agagharị n'ihe dị ka 30km / h na mpaghara mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti Shikoku, ga-erute obodo Nichinan, na ndịda ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti Kysuhu na 13.50: 4.50 pm (XNUMX GMT).
1 Mmebi kpatara
2 Track nke Typhoon Talim
Foto - Ichiro Ohara / AP
Ka ọ dị ugbu a, akagbuola ihe karịrị ụgbọ elu ụgbọ elu 770, a kwụsịtụrụ ụfọdụ ngalaba ọsọ ọsọ, yana ụgbọ oloko mpaghara na ụgbọ mmiri. Ọkara ndịda nke mba ahụ nọ na nche maka oke mmiri ozuzo, idei mmiri na mbuze, na mgbakwunye na ebili mmiri dị elu nke ajọ ifufe ahụ nwere ike ịkpata.
Track nke Typhoon Talim
Image - Nseta ihuenyo si Cyclocane.com
Typhoon Talim A na-atụ anya na ọ ga-aga n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ, ebe ọ ga-emetụ akụkụ nke ọdịda anyanwụ Honshu Island tupu ọ gafere Osimiri Japan, ebe ọ ga-abata na Hokkaido na Mọnde.
Ka ọ dị ugbu a, a na-atụ anya ịhapụ mmiri ozuzo buru ibu na ihe niile agwaetiti ahụ: millimita 350 na ugwu nke agwaetiti Kyushu, Shikoku na mpaghara Kinki; Milimita 250 na ndịda Kysuhu, mpaghara Chugoku na Tokai, na 200 milimita na mpaghara Kanto-Koshin.
Anyị ga-agwa gị ozi ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ọbịbịa nke Typhoon Talim na Japan na-eme ka mwepụ nke ihe karịrị mmadụ 600